Iwo 4 Anonyanya Kukanganisa Maitiro Gore rino muDhijitari Zvemukati | Martech Zone
Svondo, October 4, 2015 Muvhuro, October 5, 2015 Douglas Karr
Isu tinofara kwazvo nekuuya kwedu webinar neMeltwater pane Zvemukati uye Kwevatengi Nzendo. Tenda kana kwete, zvemukati kushambadzira zvine uye zvinoramba zvichichinja. Kune rimwe divi, hunhu hwevashandisi hwashanduka mukugadziriswa kuri kuita zvirimo uye kuti zvirimo zviri kukanganisa sei rwendo rwevatengi. Kune rimwe divi, masvikiro akachinja, kugona kuyera mhinduro, uye kugona kufungidzira kufarirwa kwezviri mukati.
Iva nechokwadi kuti nyoresa kune webinar! Tichave tichigovera yangu yazvino ebook kune wese anopinda.
Kanganwa kuyedza kuenderana neshanduko dzese dzakaitika mukushambadzira kweInternet gore rapfuura. Zvinotorera iwe kusvika panguva ino gore rinotevera kungo nyora. Saka pane kutora yakawanda isingakoshi uye yakakosha nguva, ichangoburwa infographic kubva MDG Kushambadzira inokurumidza kutsanangura zvemukati zvemitambo zvaunonyanya kuda kuziva nezvazvo.
MDG yawana kiyi ina mafambiro ari kukanganisa kushambadzira zvemadhijitari nzira:
Mushandisi iye zvino ave pamutemo mutariri, uye neimwe nzira masvikiro senge podcasting vari kukura.
Vhidhiyo iri kudyiwa zvakanyanya pa nharembozha.
Bhizimusi blogging inoenderera mberi iri pakati peyakabudirira nzira dzemukati yedhijitari.
Kushambadzira kunopa mitsva mitsva inoshamisa yekushambadzira yezvako zvemukati.
Tags: 2015zvemukati zvinoitikadigital zvemukatizvigadzirwa zvemadhijitari